ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများ။ ဆွီဒင်အမျိုးသားဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူ ဦး ရေအခြေပြုရောဂါလေ့လာမှု (၂၀၁၀) - Your Brain On Porn
J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။ 2011 သြဂုတ်; 34 (4): 779-88 ။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2010.04.010 ။ EPub 2010 အောက်တိုဘာ2။
Svedin CG, Akerman ငါ, Priebe, G.
ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု, ike, ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဌာန, Linköpingတက္ကသိုလ် S-581 85 Linköping, ဆွီဒင်ဦးစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဆွီဒင်စစ်တမ်းများတွင် 2015 နှစ်ပေါင်းအသက် 18 အထီးကျောင်းသားများကိုပါဝင်ခဲ့။ ညစ်ညမ်း (N ကို = 200, 10.5%) ၏မကြာခဏသုံးစွဲသူတစ်ဦးကအုပ်စုတစုနောက်ခံနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူလေ့လာခဲ့ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးရှိခဲ့ အပြာစာပေရုပ်ပုံများအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအား“ အလှည့်” လုပ်ပြီးအဆင့်မြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပုံစံများကိုပိုမိုကြည့်ရှုလေ့ရှိသည်။
တစ်ဦးကမျိုးစုံ Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင်းပြသ ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏတူညီတဲ့အသက်အရွယ်၏အခြားယောက်ျားလေးများထက်လိင်ရောင်းရှိခြင်း, ပိုမိုမကြာခဏအရက်စားသုံး, ကြီးမားတဲ့မွို့တှငျနထေိုငျခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းမြင့်မားမကြာခဏကြည့်ရှုမိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမနှစ်ဦးစလုံးမှ ပို. အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်ကြောင်းတဲ့ပြဿနာအပြုအမူအဖြစ်ထင်ရှားစေခြင်းငှါ နှင့်လည်းလက်တွေ့အင်တာဗျူးအတွက်ဖြေရှင်းခံရဖို့။
အထီးဆွီဒင်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာ (N ကို = 2015), Svedin et al ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမကြာခဏအထီးကြည့်ရှုမှာအားလုံးလျော့နည်းမကြာခဏသို့မဟုတ်မညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဆီသို့ပိုပြီးလစ်ဘရယ်သို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သဘောထားများရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမကြာခဏကြည့်ရှုသုံးပြီးယုံကြည်သည်ကြောင်းအကြံပြု